Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuneta Zvokutadza Rhoji
Kuneta Zvokutadza Rhoji.
Ndinowana mwadhi dzakawanda dzichitaura nenyaya yokuti mukadzi/murume anoramba kuvata nomurume/mukadzi wake iri ngari yokuneta, zvikuru pakati pevhiki basa rakawanda. Kozoitazve mukadzi asingashandi anoudza murume anoshanda kuti akaneta . Zvoita sokuti ari kushandisa nyaya yokuneta kuti arambe kuvata nomurume chete. Nyaya idzi dzinokwanisa kukanganisa magarire evanhu mudzimba asi kuri kusangohwisisana chete.
Kune zvinhu zvakawanda pamusha zvinonetesa munhu kusvika pakutadza kuvata noumwe wake. Zvizhinji zvacho hazvihwisiswi nomunhu asina nguva nazvo, ndizvo tichizohwa oti mukadzi /murume wake kusangoda kuvata naye.
Mukadzi –Mai vemba.
Kana uri mai vemba, pane mabasa aunotarisigwa kuita zuva nezuva akaita sokuti
Kuwadzira mubhedha pamunomuka.
Kugadzirira vana kuti vaende kuchikoro pamwe kutoenda navo
Kuwacha hembhe dzokupfeka
Kunotra vana kuchikoro
Kuendesa vana kuma kirabhu okutamba kana kudzidza zvimwe zvevana
Kusakurira nokudiridza muriwo
Kubika zvokudya zvemanheru
Kuverengera vana nokubatsira kuita homework yavo yechikoro.
Kuterera zvinotaugwa navana nokupindura mibvunzo yavo
Kubatsira vana kuenda kunovata.
Kusuka ndiro nepoto
Kugadzira ma LUNCH Box evana neremurume.
Kugadzira mvura yokugeza yomurume neyako.
Kuita nyaya nomurume
Mabasa emunhukadzi pamba haaperi chero uri munhu akagwinya sei hako unngoswera umire uchiita basa chete. Ndiko kuhi mai vemba ikoko. Kana usingazvikwanisi murume anokasira kuona kuti hauzvikwanisi.
Apa ndipo paunozoona kuti uri kuda kuiswa chose asi muviri waneta asizve murume ari kuda. Ndipo unongoona kuti nani kungorega murume akubatebate kusvika wanyorova apa uchingomupawo hako manyawi asi uchihwa kuti muviri hauna simba. Zvadaro wongofongora woisa musoro papiro worega murume achizvibatsira kuchiuno shure uko iwe kungochemerera asi basa chairo hauna rokuita.
Movata henyu mangwana ndizvozvo futi. Zvechikapa nokukwira murume zvangova zvokuita kamwe chete pavhiki kana vhiki mbiri. Idambudziko guru chose zvokuti unopota uchizvibvunza kuti ma Smoro hausi aya ane varume vatatu kana vana vanoti umwe anoisa manheru obva adzokera kumukadzi wake, umwe woisa usiku ovatapo nokuti mukadzi wake anogara kune imwe Town, umwe oisawo mangwanani uya weusiku aenda kubasa, obva adzokera kundodhiraivha chovha yake. Umwe ozoisa masikati vaya vamwe vachiri kumabasa. Iwe mukadzi wemumba wozvishaya kuti uyu muhure anozviita sei.
Tikatarisa pakadai tinoona kuti muhure haana mabasa ese awa nokuti anongozviriritira iye chete. Kungotsvaira Flat riya rinobhadhagwa RENT nevarume ava. Kana ada kudya anohi enda ku Nandos, saka ndiro haasuki, kubika haabiki, ma Lunch box anoitwa kudzimba dzevarume vake saka iye haaiti.
Nhumbi dzokupfeka anowacha dzake chete kuWashroom uye anomirira dzomboita dutu. Mabhurugwa anogara asina nengari yokumirira kuiswa. Nhumbi dzevarume vaya dzinowachiwa nevakadzi vavo. Saka basa chairo haana. Ndizvo achiwana simba rechikapa kuvarume vese ava, iwe wemumba uchitadza kuitira murume umwe chete nokuneta. Hakusi kuti unenge usingadiwo kumbohwiswa pane moyo nomurume wako. Inyaya yokuwanda kwebasa uye kusahwisisa kwevarume vedu kuti mumba mune mabasa akawanda kudai.
Mukadzi wemba anozowedzera kuneta kana achishandawo 8-5 sevamwe vemuINDUSTRY. Kubata ma lift uchienda kubasa nokudzoka manheru uku wambokwizwakwizwa mazamu nemagaro pakupakirana mudzichovha, zvigevenga zvekukwiza vakadzi zvinenge zvakatomirirawo chovha dzizere kuita musikahwa wazvo. Unosvika kumba wakatosvotwa nechekare, uku mabasa ese aya emumba akakumirira kana wadzoka. Murume womuhwa achiudza shamwari dzake vachiita nyaya pakusuka mota neSvondo kuti anoda mukadzi anopepeta murume nechiuno. Unongozviita musi umwe pavhiki. Mamwe mazuva kungofongorera murume iota zvaanoda movata. Iwe chako hapana. Uyawo murume haachinei nokuti wanakigwa here kana kwete, chero iye akuisira urume kuti awane hope. Ukatoita zemo pazviri unonoka kubatwa nehope iye achitoridza magwiriri. Ndiyo REALITY yokuroorana muchishanda mese iyoyo.
Ukasaita hanya nokuzvigadzirisa munojaira upenyu hwakadai mopedzisira ume wenyu aratidza kusembugwa nemufungo wekuisana zvokuti uya ane simba nazvo anotanga kuona sokuti ari kunyimwa. Obva atsauka zhira yemuchato oita meso meso. Ukatarisa muraini renyu unotoona vamwe vari panyaya yakadai. Zvinohi ne WHO ONE THIRD yevanhu vakura zvokuda kuvata nevamwe vanhu uye vakaroorana noumwe munhu, vari kuhura. Zvoreva vanhu vakawanda.
Ma Arabhu vanoona kuti mukadzi munhu anoenda kumwedzi vhiki yese pamwedzi, uye munhu anoneta nebasa romumba, saka vanoroora vakadzi vakawanda kuti umwe akati akaneta murume oenda kunovata noumwe mukadzi. Chavanozokanganisa ndechokuti havadi kuhwa kuti mukadzi anomurume anogara akaneta aenda kunotsvaka murume ane simba rokuvata naye. Saka inyaya yokudzvanyirira vakadzi chete.
Vakadzi tiri nani hedu pakuti tinogona kungoti rabada murume oisa hake ega. Kana zvakuwandira nhasi, udza murume kuti shamwari ndakaneta asi kana uchida kuisa isa hako asi uri wega nhasi. Murume anoona ega chokuita. Pamwe anoti chivata tozoita kuseni.
Murume- baba vemba.
Murume mabasa avo pamba haana kuwanda asi murume anokwanisa kumuka kuchakasviba ochovha bhasikoro rake achienda kubasa. Oita kana 8-15 km, osvikako oshanda zuva rese akangomira. Adaro ochovhazve bhasikoro rake achidzokera kumba. Osvika kwasviba iye abva kuchakasviba. Anosvikowana pamba hapana huni, magetsi adzima. Okwirazve bhasikoro onanga kumusika kunotenga huni. Odzoka otungidza nyuzipepa kuti aone kutema huni dziya.
Vana vakanovata mukadzi omuudza kuti Ferdinand ambopfuura nepo achida mari yake yehuku dzatakatora mwedzi wapera. Ipapo nyama mumba hamuchina asi kunodiwa mari yenyama yemwedzi wapera. Murume iota STRESS nokutadza kuriritira mhuri yake.
Mari yechikoro inodiwa vhiki inouya, Mununguna wake akafa akamusiira vana vatatu vanopinda chikoro kumusha. Mari inodiwa hayo asi haina kufanana nemari yevake vari kuBoarding SCHOOL. Asi Stress inongoita zvakadaro. Murume umwe chete hazvifaniri kuti aite vana vashanu vari kuchikoro
Kuzoti ageza moda kunovata, samba rokurhoja mukadzi wake roita shoma. Munhu aneta nokuswera akamira kubasa uye kuchovha bhasikoro. Fungwa yave panhamo dzake dzemari. Uya mukdzi ageza aka zvipfapfaidza nemafuta anonhuwirira avitarisira kurezvwa nokupiwa rudo, obva afunga kuti murume akaneta nokuti ari kuhura noumwe mukadzi. Bopoto rodzvagwa ipapo. Musi warinozomera tinohwa mashoko akawanda.
Murume munhu anotarisigwa kutaridza kuda kurhoja mukadzi wako saka iwe wega ukaita mazuva maviri usina chawamboita. unokwanisa kupa mukadzi wako fungwa dzakaipa. Kana wakaneta taurira mukadzi kuti wakaneta azive zvakunetesa. Wadaro hwisisa kuti kuneta kwako hakupedzi zemo rake saka mukumbire akukwire. Zvadaro iwe chirega akwire iwe wongoongorora maitire ake wakabatirirawo kuratidza kunakigwa. Wosamukoira kuti nguva yake irebewo. Paunozomupa zvinhu anenge aguta. Movata henyu.
Garai muchiziva kuti mese munoda zvokuisana asi dzimwe nguva muviri unokuudza wega kuti nhasi hazviiti. Zvikuru varume vedu ava vatakapiwa nomusiki wedu. Kana akaneta chose kuti amisire mukadzi wake chombo agoita zemo rinogara nguva inonakira mukadzi zvinomunetsa. Iwe mukadzi ndiwe unongozoudza murume kuti ngatichigumbatirana hedu tivate. tozozviona mangwana kwaedza.
Ngatihwisise tese kuti upenyu hwemazuvano hwakaoma saka kana taita vana tinofanira kuwana mazano okuriritira vana vedu. Kana tikaongorora upenyu hwedu tikahwisisa zvinonetesa tinokwanisa kubatsirana panyaya dzacho kuti pakunovata tinge tine samba rokurhojana zvinonakira tese.
Toti mukadzi haashandi murume anoshanda zvinonetesa. Mukadzi ngaaongorore mabasa ake kuti agadzirenguva yake zvakanaka kuti asawanza kuneta. Anokwanisa kuwacha kaviri pavhiki pane kuwacha mazuva ese. Anokwanisa dzidzsa vana kuzvigadzirira maLunch box avo uye kuzvigezesa kana vati kurei.
Gadziridza nguva dzako uwanewo nguva yokuita makuhwa nevavakidzani vako, ugowanazve nguva yokutamba nomurume manheru.
Tarisazve basa romurume wako uone paungakwanisa kumubatsira kuti kana auya kumba asashanda mabasa akawanda anonetesa.
Usatanga kufoya murume nenyaya dzokusada kurhojana newe. Ukamupa COMPLEX pazviri anotowedzera madambudziko aanawo. Murume ndewekurezva nokukurudzira kuti aite. Kana zvichikunetsa zama amire chombo, wobva wamuvatisa nomusana womukwira iwe murudzi womushandisira chiuno kusvika apera urume uku chemererawo kuratidza kunakigwa nazvo. Murume akada kukoira makadaro mudzivise umutaridze kuti unoziva zvokuita.
Zvadaro tenda murume nokugona basa kwaanoita kuti mangwana ukadazve kumukwira aone sezano rakanaka.
Kana wakaneta zviri zvokungonetawo zvanhasi, usati warambira murume tanga waongorora kuti iye zemo rake riri papi. Kana rakawanda zvokuti rinoda kutapudzwa, rezva murume kusvika iwe wanyorova. Zvadaru itai maitire asingadi simba rakawanda. Unokwanisa kuvata nedumbu wopatsanisa makumbo zvishoma wosimudzira chiuno. Murume anokutanyanga opinza chombo. Unotohwa kuti nyurududu chichipinda zvakadzika. Chimuudza aite zvisina ganyabvu kana sipidhi yakawanda. Kunaka kwazvo kunokwanisa kukupa simba rokujoinira pakukoigwa. Kana usina simba rega murume aite. Hazviiti kusachemerera nemaitire awa nokuti ukasimudza nokuderedza chiuno unobaiwa nokukwiziwa pausingasikwiziwi zvinova zvinonaka. Chikuru ndechokuti haudi simba rakawanda saka mese munonakigwa asi wakaneta.
Unokwanisazve kufongora murume okuita kusvika apedza iwe wakangofongora usina basa guru rawaita. Unokwanisazve kuvata nedivi wakafuratira murume, wosimudza gumbo murume wopinda. Wadaro wogonya kuti kuti murume anyatse kukoira ari shure. Muudze asamhanyamhanya nazvo aite zvinyoronyoro.
Zvinoreva kuti kana wakaneta unokwanisa kubvisa murume zemo. Asi iye kana akaneta pamwe hapana chaanokuita. Kuvatana mumba mukadzi ndiye MANAGER saka ndiye anoti zvikaipa anokanganisika iye. Varume vakakomboregwa kuti vanoita zvinoda miviri yavo kutipfuura.
Ukaona mukadzi wako achingokuudza kuti zvokuvatana haadi nokuti akaneta, ongorora maswerero ake uone paungamubatsira mabasa omumba. Kana waona pokumubatsira, zviri nani ushande naye pane kumutorera basa racho zvinoita sokuti wafunga kuti haasi kugona basa. Pakushanda naye bvunza maitire aanoda kuti basa riitwe. Uchaona kuti mukushanda mese munoita nyaya mowedzera kushamwaridzana. Ndipo unopotawo uchimbomira basa wombopurudzira mukadzi wako. Ukawana mukana wombomuudza nyaya dzokuti unomuda uye une rombo rakanaka kuva nmukadzi akadai.
Uku kutsvaka kupa mukadzi manyawi. Usapopotera mukadzi kuti sei asingadi kuiswa nokuti zvinodzivaidza fungwa dzake kusvika pakuti anoona sokuti unongomudira kuisa chete. Akaita fungwa dzakadai unongozoona oti pakunovata ukada anongovhura makumbo asi hana zvimwe zvaanoita saka zvangofanana nokuti dai usina kupinza nokuti hauzivi kuti anakigwa here kana kwete.
Kana wakaneta pamwe chombo chinonoka kumira asi kana chamira rega mukadzi wako ashandise abve zemo. Pamwe zemo rinokupa simba wava mukati memukadzi zvokuti unotanga kukoirawo monakigwa mese. Pamwe unorega mukadzi oita basa ega. Chikuru kuwirirana nokuziva kuti muri kubatsirana.
Kuneta nguva dzese.
Ukaona umwe wako akaneta nguva dzese, hwisisa kuti pamwe ane chigwere. Kune zvigwere zvinopa kuneta nokushaisa samba. Enda naye andotesitwa aonekwe chikonzero. Pamwe zvinongoda mapiritsi kuti dambudziko ripere. Pamwe pane maVITAMIN aasiri kuwana. Nyaya yokuda kuvata naye ndiyo nyaya inokwanisa kuratidza kuti ane dambudziko rinoda varapi.
Pamwezve kana ange azvara mwana pasina kupera gore, zvinokwanisika kuti ane Dipression asi pamwe haina kuwanda zvokuda kuenda kuchipatara. Batsiranai mudzokere pautano mutanga nyaya dzokuvatana zvishoma nezvishoma mowedzera kusvika pamunogonera mese.
Kutukanirana nyaya yokuneta handizvo nokuti dzimwe nguva idambudziko rinotoda kuti umubatsire kana kuti uende naye kuchipatara.
Ngatihwisisezve kuti kuneta kwemukadzi ane utano hwakakwana kunoitiswa nokusada kuvata nomurume wake iri ngari yokuti murume haasi kumugutsa kana kuti iye mukadzi ane chikomba kana kuti akanetawo zvechokwadi. Mukadzi anohura zvinomunetsa mufungwa kuhura kwake saka anowanzoderedza zemo romumba. Zvikuru kana achimhura murume wake pane chimwe chinhu.
Murumewo kuneta kunokwanisa kuitiswa nokuhura asi kazhinji murume akatanga kuhura anoonekwa nokuwedzera kuda kuvata nomukadzi wemumba, kwete kutanga kuti akaneta. Varume vanokavhira chihure nokuwedzera zviitwa zvemumba kuti mukadzi asafungira kuti pane chiri kuitika.
Maitire edu chihure akasiyana kuvakadzi nokuvarume zvikuru kana tange tisina kupokana zvinozikamwa pakati pedu. Saka usati wafungira umwe wako kuhura tanga wahwisisa kuti nyaya yako iri papi. Varume havanetsi kuziva kuti ari kuhura asi vakadzi vanonetsa. Mukadzi anohura anovanza chihure chake kupfuura murume anohura.
Kuneta mumba chinhu chinofanira kukasira kutaurirana pachiri nokuti chine nyaya dzakawanda dzinoti zviito, basa, chigwere. Usaiginowa munhu anogara akaneta kana kuzviiginowa iwe kana wapedza vhiki mbiri wakaneta.
Posted by Mai E Chibwe at 10:54
Maita henyu nechidzidzo chakanaka. Nyaya yekuti ndakneta iyi inyaya inonzwisisika, Asi panedzimwe nguva dzekuti ndinotozoona kuti dzaanungo chaidzo. Achibva kuramba unoona aakutora washeni onowacha odzokazve achitaura nyaya imwechete yekuneta. Dzimwe nguva mukadzi anenge asingade zvake nguva iyoyo, ko munhuwo ka anonzwa kuda kana kusada asi kuzo nyepa nekuzoenderera mberi zvisingagamuchirike. Dzimwe nguva zvekuto pfuura mazuva asingade achingoramba.
chibwe ndapota hangu ndibatsirei panyaya yemurume wangu.
Ndinyorere ku kero iyi titaure. maichibwe@yahoo.co.uk
Kana munhu asingadi hake musi iwoyo, zviri nani kungotaura kuti ngatizoita mangwana kana kuti kungobatsirawo umwe wako kuti asununguke muviri pane kunyebera kuti wakaneta.
Imba yangu inenge yapindwa nasatani l and help urgently.kubva musi wemuvhuro ndanga ndichinonoka kubva kubasa nekuda kwekuwanda kwebasa saka ndaisvika mskana abika.zvino pamazuva matatu iwaya baba vashanduka kuita kwavo.handisi kuzvinzisisa ini zvekuti ndakufungidzira kuti mskana anogona akashandisira baba mushonga munezvekudya.mskana uyu mukadzi mukuru ane vana vatatu ini ndine karusvava.mazuva ese ndinochibika ndeganekupakura ndega asi apa zvakangoitika kuti basa rakabva rawanda kwandinoshanda ndobva ndamuti aenderere mberi nekubika sezvo ndaiziva kuti ndichanonoka kusvika pamba (ndaisvika pamba zvekuma6 manheru)..zviri kundibata kudai nekuti wkend chaiyo mumba maiva nerufaro asi kubva zvavadzoka kubva kuoff nesvondo usuku zvabva zvatangawo zvababa zvandareva.
Kubvawo muvhuro iwoyo handisati ndasangana nababa pabonde.
Ndibatsireiwo mai zvisati zvaenderera mberi, pamwe pane pandirikurasika kana kuti ndapfuhwirirwa murume nemskana. ndatenda. PLEASE HELP ME!
Veduweeka. Ngatibvumirane kuti Hakuna mushonga unoshanda panyaya dzezvomumba izvi. Kana murume ada musikana webasa hapana mushonga apa. Ruchiva chete. Iwewo kana wada chikomba, Ruchiva chete, hapana mushonga. Ngatisanyeberana kuti timhure munhu anyengwa. Musikana akahi bvisa bhurugwa nomunhu anobhadhara mari yake pamwedzi umwe noumwe ngatisati mushonga wemusikana asi kuti kusahwisisa kwemurume.
Iwewo mukadzi wemunhu ukasvika kumba wakaneta, neta hako asi ziva mumoyo mako kuti uri mukadzi wemunhu anoda zvokukuvata chero wakaneta chero usina. Kana wakaneta Vata nedumbu wopfavisa muviri murume opinda noshure ozviitira basa ega. Mapedza chivata hako zvapera. Hapana vhigoroni inodiwa ipapo. Kungorega murume achiita zvaanoda kuita. Muchipedza mbundikira murume wako womuisa pazamu womuudza kuti aita basa waguta. Movata henyu.
mai chibwe l feel like my husband is using me as a sex machine.unondikwira ndisigadi ondirhoja less than 5min kwakutunda ondisiya pasina chandahwa. pedzezvo otanga kureketa nyaya dzisingaenderane nezverhoji. l'm angry mbuya zvirikundidya moyo ndodii.
Kurhojewa wakati zii uye kuti mapedza wotadza kuudza murume zvaitika kuti ahwisise, zvinoreva kuti murume anoramba achingoita izvozvo zvakafanana zuva nezuva nokuti hapana chaanoziva pazviri. Munhu ita nguva yaunotsanangurira murume wako kuti uri kuhwa sei kana muchiisana. Murume munhu saka anofanirawo kudzidza kuti vamwe vanhu vanoshanda sei. Kana iwe ukapinzwa chombo wobva wapihwa urume ipapo zvadaro wongoti zii nazvo, anofunga kuti watonakigwawo sezvaaita iye.
Hazviiti kuti mese mugare muchinakigwa pasina kutaurirana. Kana mataurirana mukahwisisana ndipo anozokubvunza kuti zvoitwa sei. Ipapo mobva matanga kubatsirana pazviri. Ukangomirira kuti achaziva kuti ari kukukasirira unochembera uchingoitwa zvimwezvo. Murume ndewekuudza asi pakumuudza paya udza wakachenjera zvokusamubvisa konifidhenzi yake yokufunga kuti anogona kurhoja. Tsanangura kuti maitire ake anonaka chose asi nguva ipfupi zvokuti hausi kusvitswa kwauri kuda kusvika. Hakuna murume asingadi kuti mukadzi wake afunge kuti anogona kuisa saka achaterera agoshanda newe pakuchinja maitire enyu.